मानिसको अस्तित्व नै संकटमा ! | सिमान्तMarginal मानिसको अस्तित्व नै संकटमा ! – सिमान्तMarginal
Homeबिकास-बहसमानिसको अस्तित्व नै संकटमा !
निस्चित रुपमा चौथो अौध्योगिक क्रान्तिले विश्वकै आम्दानी बढाउन मद्त गर्छ तर त्यो भन्दा धेरै यसले आर्थिकअसमानतालाई बढावा दिनेछ । धनीहरुलाई अत्यधिक फाईदा पुग्नेछ । खासगरी यसले श्रम बजारमा मानिसको सट्टा यन्त्रलाई स्थापित गर्नेछ । महिलाहरु कामबाट बंचित हुनेछन भनेर अनुसन्धानहरुले दावी गरेका छन । हुन पनि तेश्रो अौध्योगिक क्रान्तिले आर्थिक असमानता बढाएको छ त्यसैले चौथो अौध्योगिक क्रान्तिले गरिवी र असमानता कम गराएन भने यो नै बिनासको कारण बन्न पनि सक्छ । हामीले के उत्पादन गर्छौँ भन्नेमा मात्र सिमित नरहेर हामी को हौँ भनेर मानिसको अस्तित्व माथि नै प्रश्न थपिनेछ ।
अौध्योगिक क्रान्तिहरुसंगै बिस्तार भएका उध्द्योगमा गरिवहरुको ‘शक्ति’ लाई प्रयोग गरिएन भने त्यस्तो उत्पादनमा उनिहरुकोअपनत्व र स्वामित्व रहँदैन, परिणामत: यिनिहरु एक हुनेछन अनि बिनास सुरु हुनेछ । धनीहरुले चैन गर्ने गरिवहरुले ‘सहन’ सक्दामात्र हो । त्यसैले चौथो अौध्योगिक क्रान्तिको पूर्व सन्ध्यामा दिगो बिकास सबैका लागि होस भनेर स-शर्त शुभकामना दिउँ ।